[निबन्ध] मान्छेलाई घडीबाट हानि
लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सोमबार, कात्तिक १०, २०७७, १३:११
घडीको आविष्कार हुनुभन्दा अगाडि मनुष्य जातिलाई समयको होश दिने प्रकृति नै थिइन्। आजकलका मान्छेलाई 'कुखुरी काँ' को मोल थाहा छैन। उहिले-उहिले यो सिउरदार चरो समय देखाउने चिजहरुमध्येको भाले थियो। त्यस्तै हामी आजकल तारा हेर्दैनौं। तर, उहिलेका मान्छेलाई आकाशमा जादु मात्रै थिएन। समयको संकेत पनि थियो।
छायाको अध्ययन बीसौं शताब्दीको नजरमा त्यत्तिको मूल्यवान् छैन, जत्तिको घडीअगाडिको युगलाई जँच्दथ्यो। परेवाको कुर्लन र अनेक संकेतहरुबाट समयको विचार गर्न मानिसहरु हामी जस्ता लापरवाही थिएनन् यो कुरा स्पष्टतया बहसबिना मालूम हुन्छ कि घडीको आविष्कारले मनुष्यजातिलाई हानि सिवाय केही गरेन।
हामीहरुले अब यन्त्रद्वारा प्रकृतिको कार्यक्रमको अध्ययन गर्न सिक्यौं र आफ्ना निमित्त विचार गर्नुभन्दा यन्त्रद्वारा विचार गर्न थाल्यौं। हाम्रो मगजमा मेसिनको अत्याचार बढ्यो र स्वतन्त्र अन्वेषण र प्राप्तिको मोहनीबाट सभ्य मानिस हरहमेसा वञ्चित छ। घडीबिना विचार गर्ने व्यासजी बने, घडी लिएर विचार गर्ने लक्ष्मीप्रसाद भनाउँदो। हामी आजकल खियौटे ठेट्ना बनिरहेछौं र हाम्रा मुटुका ढुकढुकी यन्त्रका टिकटिकीसँग तालमा मिल्दछन्। हामी यन्त्र बनाउँछौं, उनीहरु मन्त्र बनाउँथे। जहाँ आधुनिक पुरुषलाई पाङ्ग्रा र कमानीको तालिममा काम गर्नुपर्छ, पहिलेका मान्छेहरु प्रकृतिका संकेत र सूचनाहरु पाएर विशालको तालिममा काम गर्दथे।
प्राचीन युगमा मनुष्यहरु त्रिकालदर्शी हुनुका कारण यो एक हुन सक्तछ कि उनीहरु समयलाई यसरी टुक्रा पार्दैनथे र अनन्तको आह्वानलाई सानो टिकटिकीमा परिणत गर्दैनथे। हाम्रो आंशिक दृष्टि छ, उनीहरुको समष्टिरुपको दृष्टि थियो, त्यसैले प्राचीनकालमा ऋषि भए, अर्वाचीनमा छ्यासमिसे। पुराना महात्मा सबको आत्माको महात्म्य देख्थे, तर आजकलका महात्मा आफ्नै आत्माको महात्म्य देख्तछन्।
पहिले-पहिले ऋषिले पलेटी कसे भने दिन बितेको थाहा पाउँदैनथे, तर एकै छिन समाहित भएर बसेँ भने मलाई घडी हेर्न मन लाग्दछ। जहाँ घडीको संकेत हुँदैन, त्यहाँ मानव-आत्माले अनन्तसँग नाता जोडेको देखिन्छ। तर, म समयलाई साना-साना टुक्रामा हेरेर दीर्घकालदेखि तर्सन्छु र थोरै क्षणको धैर्यले मेरो नाक फुल्दछ। अनन्तबाट म त्यत्तिकै सधैं दूर छु, जत्तिको होश हराएका भारद्वाज समाधिस्थ अवस्थामा मभन्दा माथि देखिन्छन्।
हामीहरु जीवनलाई सेकेन्डमा बाँडेर टुक्र्याइरहेछौं, ध्येयशून्यताको चक्करमा बाटुला घडीहरुको सुईका यात्रामा समय व्यतीत गरिरहेछौं। हामीहरु छरिइरहेछौं, संकीर्ण हुनु विकीर्ण हुनु हाम्रो सभ्यताको लक्षण हो। हामी एक घडीलाई धेरै देख्तछौं, त्यसलाई साठी मिनेटमा र हरएक मिनेटलाई साठी सेकेन्डमा बाँड्दछौं। हाम्रो आजकल कनिकाकेलाइ छ। महान् तत्त्वहरु सेकेन्डका होशमा उफ्रँदैनन् र हामीहरु देवताको दिन र ब्रह्माको युगमा कल्पना गर्न सक्तैनौं। हामीहरु छोटकरी बनिरहेछौं, खुम्चिरहेछौं, बोक्रा पढ्दछौं, सतह हेर्दछौं, हिसाबको क्षेत्रमा घुम्दछौं, आत्मालाई छाडेर रक्तसञ्चालनका नियमहरु अध्ययन गर्दछौं। मेरो विचारमा त यो घडीहरुकै अत्याचारले भएको हो।
किनकि आजकल हामीहरु घडीले उठ्तछौं र घडीले बस्तछौं। अध्यापक क्लासमा आउँदा घडी हेरेर आउँछन् घडी हेरेर जान्छन्। आजकलको विद्या र प्रमाणपत्रका बोक्रेपनमा विचार गर्ने मान्छेले थाहा पाउँछ, मानव-आत्मामा घडीको कत्रो अत्याचार छ। पहिले-पहिलेका गुरुहरु हरहमेसा दिनरात शिक्षा दिएर विद्यार्थीको आचार-व्यवहार समेतमा ध्यान राख्तथे। आजकलका मास्टरजीहरु घडी हेरेर पढाउन बाह्रकोठे बाटुलमुखेका काला अंकहरु गनीगनी पैसा लिन्छन्। विद्याको धारो समयमा खुल्दछ र समयमा बन्द हुन्छ, उपदेशको घडी तौलले खरिद-बिक्री हुन्छ अनि हामी बोक्रे हुनु कुन गजबको कुरा हो र?
हामीलाई परिश्रमको बाँड सिकाउने घडीको आविष्कार हो। बरु यन्त्रहरुको जेठो दाजु नै घडी हो। हामीहरु हमेसा बेफुर्सती छौं, सास फेर्न पाइन्न! स्वाँ-स्वाँको युगमा हामी घडीका सुईका मार्गदर्शनमा छौं। हाम्रा सुईहरु मुसा दौडे झैं दौडन्छन्। अनि आधुनिक कविहरु किन बिलौना नगरुन्:- यो जाबो जीवन के हो, यदि चिन्ताले परिपूर्ण भएर हामीले एकै छिन उभिएर एकोहोरो हेर्नकै फुर्सत पाउन्नौं भने? साँच्ची नै लोखर्केले सुपारी लुकाउने ठाउँ हेर्न हाम्रो फुर्सत छैन : हामी पैसा-पैसा भनी मरिरहेछौं। घडीले हामीलाई सिकायो कि जीवन व्यापार हो तर एकाग्रीकृत अभिप्राय होइन। हामी टिकटमा दौडिरहेछौं। हामी विशालका मुटुको ढुकढुकी सुन्न सक्तैनौं।
यो लेख लेख्तालेख्तै मेरो कानमा नजिकको घन्टाघरले चार टड्कारा प्रहार गर्दछ र टिनटिनाहटले मेरो अफिसको समय सिद्धियो भन्ने असर जनाउ दिन्छ। कति मीठोसँग पाठक महाशयसँग कुराकानी चलिरहेको थियो र अरु कति मीठा कुरा निकालौंला भने जस्तो लागेको थियो। तर अपशोच, मेरा सहकारीहरु सबै फट्फटाउन लागिसके। घन्टाघरको राज्यमा मानव-मगजलाई यत्तिकै अधिकार छ र बीसौं शताब्दीको लेखको नमूना यही हो।